Ndandivakalelwa Kukuba Ndiphumelele | UMadona Kankia
IBALI LOBOMI Owayesakuba lilungu loMbutho wamaKomanisi eGeorgia, uncede abantu abaninzi bafunda inyaniso. Ngo-2015, uye waphumelela kwiklasi yokuqala yeSikolo Sabavangeli BoBukumkani eTbilisi.
XA NDEVA ngenyaniso ngo-1989, ndandililungu eliphambili loMbutho wamaKomanisi kwidolophu yasekhaya, eSenaki, ibe ndimane ndihlala kwiSupreme Soviet eGeorgia, namhlanje efana nepalamente. Ndandiza kutshata nomnye umfana, ngoko ndandivakalelwa kukuba ndiphumelele.
UMama noTata bandifundisa ukuthanda uThixo. Yiloo nto, ndandikholelwa kuThixo, nangona ndandingumKomanisi. Ukuqalisa kwam ukufunda iBhayibhile, ndafumana iimpendulo ezanelisayo kwimibuzo yam, ngoko ndagqiba ekubeni ndizahlulele kuYehova. Kodwa izalamane zam, abahlobo, abantu endisebenza nabo, nomntu endandiza kutshata naye babengavumelani nesigqibo sam.
Unqulo lwam olutsha lwabangela ukuba izalamane zam zingandifuni, ibe lwalungadibani nezopolitiko. Ndagqiba ekubeni ndimke ekhaya, ndahlukane nomntu endandiza kutshata naye, kwaye ndiyeke emsebenzini nakuMbutho wobuKomanisi kunye neSupreme Soviet. Emva kokuba ndibhaptiziwe, ndafumana ingcinezelo evela kwizihlobo nezalamane zam. Ekubeni ndandingumntu owaziwayo ekuhlaleni, ukuba liNgqina kwam kwabangela ingxaki. Ngoko ndafudukela kwisixeko saseKutaisi, apho ndafika ndanguvulindlela khona.
Xa abantu bendibuza ukuba andizisoli na ngesigqibo sam, ndikhawuleza ndithi andizisoli tu. Nangona abazali bam babengaluqondi ukhetho lwam, ndiyababulela ngokundifundisa kwabo ukuthanda uThixo nommelwane. Oku kuye kwandinceda kakhulu.